Imbiki Herilaza: “Alohan’ny 5 febroary ny fanolorana PM “ | NewsMada
Imbiki Herilaza: “Alohan’ny 5 febroary ny fanolorana PM “
“Aorian’ny fanambaran’ny HCC ny filohan’ny Repoblika mandritra ny dimy taona manaraka, tsy maintsy misy ny fianianan’ny filohan’ny Repoblika mba hahazoana mametraka azy amin’ny toerany, araka ny sata repoblikanina.” Izay ny fanazavan’ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, momba ny ho tohin’ny toe-draharaham-pirenena taorian’ny nanambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) voka-pifidianana ofisialy.
Rehefa vita izay, tsy maintsy misy ny fifandimbiasam-pahefana ataon’ny filohan’ny Repoblika teo aloha izay nametra-pialana sy ny filohan’ny Repoblika vaovao izay voafidim-bahoaka. Aorian’izay, milaza ny lalàmpanorenana fa mametra-pialana tsy misy fepetra avy hatrany ny praiminisitra sy ny mpikamban’ny governemanta miaraka aminy.
Tsy miandry ny fifidianana solombavambahoaka ny raharaha
Hifarana amin’ny 6 febroary ny fe-potoam-piasan’ireo solombavambahoaka amin’izao fotoana izao. Ary araka ny tetiandro napetraky ny Ceni, tamin’ny 17 desambra 2018: tokony ho amin’ny 20 marsa ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy maintsy hisy ny fihemorana ny amin’izay. Satria tsy maintsy havoakan’ny governemanta 90 andro alohan’ny fifidianana ny didim-panjakana mandrafitra ny fari-pifidianana solombavambahoaka sy didim-panjakana fihaikana mpifidy handatsa-bato amin’izay fifidianana izay.
Ny dikan’izay: tsy maintsy alohan’ny 5 febroary ho avy izao no tsy maintsy hatolotra ny praiminisitra vaovao, hananganany governemanta vaovao. Tsy afa-miandry ny raharaham-pirenena . Efa mazava ihany koa fa tsy maintsy mametra-pialana ny praiminisitra sy ireo mpikamban’ny governemanta. Ny dikan’izay, tsy afa-kiandry ny fahalanian’ny solombavambahoaka vaovao vao afa-kiasa izy.
Hialana ny fahabangana amin’ny andrimpanjakana
Mino izy fa tsy maintsy hangataka fanemorana ny fifidianana solombavambahoaka ny governemanta, satria amin’ny andro avy orana izany. An’ny HCC ny mamoaka izay fanomezan-dalana ny fanemorana ny fifidianana izay. Izay no hitondrana ny raharaha hoe manana fahefana feno ny solombavambahoaka, satria tsy mbola tapitra ny fe-potoam-piasany alohan’ny 6 febroary. Mba hialana amin’ny fahabangana eo amin’izany andrimpanjakana izany.